Tranombitsika - Tily eto Madagasikara
Facebook : https://facebook.com/tranombitsika
Scout.org : https://www.scout.org/node/549599
Google Map : https://goo.gl/maps/rW9ew7zLowhHjHph7
Fanazavana fanampiny : 0341141225
Famandrihan-toerana : https://www.scout.mg/tranombitsika/dingana-arahina/
Famaritana Ny saha ivotoeran’ny Tily eto Madagasikara no antsoina hoe Tranombitsika. Anarana nalaina araka ny voalazan’ny Soratra masina : « Mandehana … diniho ny fanaon’ny vitsika ka mba hendre » (Ohabolana 6, 6). Io koa no fototra hamaharana entina hampivelarana sy hanapariahana ny tanànan’ny Tily manerana ny Nosy. Alain-tahaka ny Gilwell park, izay naorin’i Baden […]
Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny 16 desambra 2017 ny fanorenana ny Tranombitsika ary notokanana ny 21 aogositra 2021.
Ireo dingana arahina ho eny amin’ny Tranombitsika
Miha-mahazo endrika tsikelikely ny Tranombitsika, tananantsika Tily rehetra, eny Antsahamarofoza. Taorian’ny fijoroan’ny trano Ivotoerana Fanofanana Tily Eto Madagasikara (IFTEM) ao anatin’ny tanàna dia efa ho vita koa ny Espace Vitsika. Fananana iombonan’ny Tily eto Madagasikara io tanàna io ka sady niara-nifanome tanana nanangana ny Tily rehetra, no ho afaka hisitraka hampiasa azy koa. Ireto manaraka […]